Isithando Somlilo Sokushisa Abenzi & Abahlinzeki | I-China Industrial Furnace Heat Treatment Factory
Uyemukelwa kumawebhusayithi ethu!
Ukuhlanzeka okuphezulu ukuminyana okuphezulu strenth graphite imikhiqizo
Graphite Isikhunta Insimbi Precious
I-Crucible Yokuhlaziywa Kwelabhoratri
I-Graphite Sheet Graphite Plate
I-Graphite Heating Element
Izingxenye ze-Graphite Mechanical
Graphite Lubrication Particle
I-Graphite Bush ne-Graphite Bearing
Graphite Ukugaya Isikhunta
Ishidi le-Pyrolytic Graphite
Pyrolytic Umsizi Iziko
Pyrolytic Umsizi Igridi electrode
Graphite uphawu Ring
I-Natural Flake Graphite Powder
Inwebekayo Umsizi we-Graphite
I-Graphite Felt, Indwangu, Nentambo
I-Graphite Soft Felt
I-Graphite Hard Felt
I-Graphite Raw Material
I-Isostatic Pressing Formed Graphite
Graphite nge esinemthombo
Ishidi Elincane Lama-CFC
Ishidi Elikhulu Lama-CFC
Ishidi Elikhulu Lesikwele leCFC
CFC Rocket umlomo wombhobho
CFC Brake Pad
Carbon Blade ngoba Umshini Pump
Imikhiqizo yeSilicon Carbide Graphite
Silicon Carbide Graphite Iziko
Izingxenye ze-Silicon Carbide Graphite Mechanical
Imikhiqizo ye-Graphite Clay
Graphite Clay Iziko
Electrolytic Plating Imboni
Ukwelashwa Kwesithando Somlilo Sezimboni
Imboni Yensimbi Ye-Powder
Ukucubungula kagesi kanye neMboni ye-EDM
Imboni Entsha Yamandla Ebhethri
Imboni ye-Semiconductor ne-Electronics
Imboni Yokuncibilikisa Insimbi
Imboni ye-Aluminium ne-Aluminium Alloy
Umkhakha Wekukala Nekuhlaziya
I-Aerospace neMboni Yezempi
Imboni Yobunjiniyela Bikagesi
Imboni ye-Carbon arc air gouging
Insimbi engagqwali yokukhipha imboni eqhubekayo
I-Hard fiber ehlanganisiwe ...
Polyacrylonitrile Isekelwe Gra ...
Graphite Iphepha / graphite foi ...
I-graphite clay crucible
I-graphite heater uhlobo lokushisa komzimba wesithando sokushisa esiphakeme. Izinga lokushisa lomkhiqizo lingaphakanyiswa ngokushesha ngokuvula amandla
Graphite Ukushisa ipuleti
I-graphite inezici ezinhle zokumelana nokushisa okuphezulu nokuqhuba ukushisa, futhi ingumthombo omuhle wokushisa. Ishidi le-graphite lifudunyezwa ngokuqhuba, okuyiyona ndlela eyinhloko yokushisa kwesithando somlilo esiphakeme.
Induku yokushisa ye-graphite
Kunezinhlobo ezingaphezu kwezingama-20 zezingxenye ze-graphite ku-CZ field thermal, izakhiwo zayo ezibonakalayo nobuchwepheshe bokucubungula bunethonya elikhulu ekhwalithi ye-crystal eyodwa. Sisebenzisa izinto ze-graphite ezisezingeni eliphakeme ezinamandla aphezulu, ukusetshenziswa phansi, isakhiwo esihle, izakhiwo ezifanayo zomzimba nezamakhemikhali ukukhiqiza izinhlobo ezahlukahlukene zensimu yokushisa nezingxenye, ngakho-ke imikhiqizo inekhwalithi ephezulu.
Izingxenye ze-graphite zesithando somshini
Enqubweni yokukhiqizwa kwesithando somshini, i-graphite material iwine imakethe yohlelo lokusebenza ebanzi ngenxa yezici zayo ezihlukile. Izingxenye ze-graphite esithandweni somshini zifaka phakathi: i-heat insulation carbon, intambo yokushisa ye-graphite, isitimela somhlahlandlela wesithando somlilo, i-graphite guide nozzle, induku yomhlahlandlela we-graphite, isiqeshana sokuxhuma i-graphite, insika ye-graphite, ukusekelwa kombhede we-graphite, i-graphite screw, i-graphite nut kanye neminye imikhiqizo.
I-Polyacrylonitrile Based Graphite Fiber Felt
I-graphite izwa ukuthi ingahlukaniswa nge-asphalt-based graphite wezwa, i-polyacrylonitrile-based (PAN-based) graphite yezwa futhi i-viscose-based graphite yezwa ngenxa yokukhetha okuhlukile kwemizwa yokuqala. Ukusetshenziswa okuyinhloko kwe-graphite okuzwayo kunjengokufakwa okushisayo nezinto zokwakha ukushisa kwesithando somlilo esisodwa se-crystal silicon Ingasetshenziswa njengesihlungi sezinto zokuhlanzeka okuphezulu okwenziwe ngamakhemikhali e-reagent embonini yamakhemikhali.
I-Hard fiber ehlanganisiwe ye-carbon fiber (Umkhiqizo wokuhlanzeka okuphezulu)
I-Hard fiber ehlanganisiwe yekhabhoni ezwayo icutshungulwa ubuchwepheshe obukhethekile bokuqina nokusetha, kanye nokwelashwa kokuhlanzwa okushisa okuphezulu nge-graphite foil, i-polyacrylonitrile base carbon wezwa kanye ne-polyacrylonitrile base carbon indwangu njengezinto zokusetshenziswa. Ukumelana kwayo okufudumele, ukumelana nokushaqeka okushisayo, ukumelana nomoya, ukusebenza kokufakwa okushisayo kuhle kakhulu, ngakho-ke kusetshenziswa kakhulu emafutheni ezimboni zezinsimbi (isithando somlilo esiphehla ingcindezi enkulu, isithando somlilo esinciphisa ingcindezi, isithando somshini sintering).
Indwangu yekhabhoni iphothwe futhi yalukwa nge-polyacrylonitrile base (PAN) carbon fiber, ehlukaniswe yaba yindwangu yekhabhoni yokushisa, indwangu yokushisa ye-carbon, futhi yaqinisa futhi yaqinisa indwangu yekhabhoni. Ingathathwa futhi njengezinto eziqinisa izinto ezihlanganisiwe zekhabhoni / zekhabhoni.
Isithando somlilo sezimboni luhlobo lwemishini esebenzisa ukushisa okuguqulwa ngamandla kagesi ukushisa izinto zokwakha noma izingcezu zomsebenzi ekukhiqizeni izimboni. Isetshenziswa kabanzi ekukhiqizeni nasekuhlolweni kwe-ceramics, i-metallurgy, i-electronics, ingilazi, imboni yamakhemikhali, imishini, i-refractory, ukuthuthukiswa kwezinto ezintsha, izinto ezikhethekile, izinto zokwakha, amanyuvesi nezikhungo zocwaningo.
Isilinda esinzima sokulondolozwa kokushisa
Emkhakheni we-photovoltaic, imikhiqizo ekhethekile ye-graphite esetshenziselwa ukukhiqizwa kwe-polysilicon ifaka: ama-reactors, amakhadi e-polycrystalline, abasabalalisi begesi, izinto zokushisa, izivikelo zokushisa namashubhu okulondoloza ukushisa.
9-541 Liangli 3rd Street, Eastern Zone Tongzhou Economic Development Park, eBeijing, eChina
© Copyright - 2010-2020: Wonke Amalungelo Agodliwe.